design | YoeYar CG Blog | Page 2
ယနေ့ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအဝိုင်းနယ်ပယ်တွင် လူသားများသည် မိမိတို့ နေထိုင်လုပ်ကိုင်နေရသော အဆောက်အဦးများအား အမိုးအကာ လုံရုံဟူသော အနေအထားမျိုးတွင် ရောင့်ရဲတင်းတိမ် မနေတော့ဘဲ တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့၊ တစ်ရာသီထက်တစ်ရာသီ ပိုမိုဆန်းသစ်သော အဆင်တန်ဆာ ဒီဇိုင်းများဖြင့် ဖန်တီးပြုလုပ်ရန် ဆန္ဒရှိလာကြပေသည်။ တိုးတက်လာသော ခေတ်စနစ်၊ နည်းပညာများနှင်အညီ လူသားတို့၏ လိုအပ်ချက် စိတ်ဆန္ဒတို့မှာလည်း တစ်စထက်တစ်စ မြင့်မားလာကြပေသည်။
ယခုလက်ရှိပြောင်းလဲနေသော နည်းပညာရပ်များက ဒီဇိုင်းပညာရှင်များအား အမြဲတစ်စေ တီထွင်ကြံဆနေစေရန် ဖိအားပေးလျက်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ဒီဇိုင်းပညာရှင်များသည် ပြောင်းလဲနေသော ခေတ်စနစ် အခြေအနေများကို မျက်ခြေအပြတ်မခံပဲ အဆောက်အအုံတို့၏ ပြောင်းလဲခြင်းပုံစံ၊ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ ဆန်းသစ်မှု၊ ထပ်မံဖြည့်စွက်မည့် ပစ္စည်းများကို လူသားတို့၏ လိုအပ်ချက်နှင့် ထပ်တူကျအောင် အစဉ်တစိုက် ကြိုးပမ်းနေသင့်သည်။ ထို့အပြင် ဒီဇိုင်းပညာရှင်တစ်ယောက်သည် တစ်ခုခုကို ဖန်တီးသောနေရာတွင် တစ်ထပ်တည်းဖြစ်နေသော ရှုခင်းကိုပင် အမြင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်စွမ်း ရှိရမည့်အပြင် စွန့်ပြစ်ပစ္စည်းထဲမှပင် ဆန်းပြားသော အသစ်အဆန်းတစ်ခု အသွင်ကို ဖန်တီးကာ အစားထိုး အသုံးပြုနိုင်ရပေမည်။
ဒီဇိုင်းပညာရှင်တစ်ယောက် အနေဖြင့် ၅နှစ်စာအတွက် ပြသနာများကို ကြိုတင်တွေးတော အဖြေရှာဖွေရာတွင် ၅မိနစ်အတွင်း ဖြေရှင်းလိုက်သော ဖြစ်ကတတ်ဆန်း လုပ်ရပ်မျိုးကိုလည်း ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါသည်။ ဘက်ပေါင်းစုံ၊ နေရာပေါင်းစုံမှာ မရှိမဖြစ် အရေးပါနေသော ဒီဇိုင်းပညာရှင်တစ်ယောက် ဖြစ်နိုင်ဖို့ ဆန်းပြားမှုကို ခုံမင်တတ်သော လူသားတို့၏ စံသတ်မှတ်ချက်များကို ပြည့်စုံအောင် ဖန်တီးပေးစေနိုင်ရန် ဆန်းသစ်သော အတတ်ပညာများကို ကျွမ်းကျင်မှုရှိရန်၊ ကြိုးပမ်းခြင်းဖြင့် အိမ်တိုင်ရာရောက် ဖန်တီးပေးနိုင်သည်ဟူသော ဝန်ဆောင်မှုတို့ဖြင့် ကမ္ဘာကြီးအား လှသထက်လှအောင် အလှဆင်ကြပါစို့။
ကျွန်တော့ဆရာတယောက်ကစကားတခွန်းပြောဖူးပါတယ် “သန့်ဇင် ကိုယ်ဆွဲလိုက်တဲ့ မျဉ်းတကြောင်းဟာ တည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာ ခက်ခဲနိုင်သလို အဲဒီမျဉ်းတကြောင်းခြင်းစီမှာ အဓိပ္ပါယ်တမျိုးစီရှိတယ်။ အဲဒီမျဉ်းတကြောင်း စီမှာရှိတဲ့ နေရာအသီးသီးဟာ လူ့ရဲ့ ခံစားမှုအာရုံကြောင့် သရုပ်လက္ခဏာ တနည်းအားဖြင့် ခံစားမှု ဖြစ်ပေါ်လာတယ်″ တဲ့။ ကျွန်တော်တို့ မျဉ်းတကြောင်းစီရဲ့ အဓိပ္ပါယ်တခုချင်းကို မစဉ်းစားခင် မျဉ်းဆိုတာကို အရင်စဉ်းစားကြည့်ရအောင်လားဗျာ။
မျဉ်းကြောင်းတွေဟာ အလွန်ရှင်းလင်းတိကျတဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိကြတယ်။ တိကျတဲ့ အဓိပ္ပါယ် တနည်းအားဖြင့် ထင်မြင်ချက်မပါပဲ အဲဒီမျဉ်းတကြောင်းကို စာရွက်ပေါ်မှာ ရေးဆွဲလို့ မရပါဘူး။
လျင်မြန် သွက်လက် အားရှိ ခိုင်မာတတ်တဲ့ သဘောကိုဆောင်ပါတယ်တဲ့။
အဲဒီ မျဉ်းခုံးနဲ့ မျဉ်းခွက် နှစ်ခုကိုပေါင်းစပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် တည်ငြိမ်ခန့်ငြား ဂုဏ်သရေရှိ စွမ်းအားပါပြီး အလှအပဖွဲ့ ပန်းချီဆန်သော (Hogarth’s line of beauty) မျဉ်းကို ရရှိပါတယ်တဲ့။
၎င်းမျဉ်းများသည် စက္ခုအာရုံ အဆုံးတိုင်ရောက်အောင်(ခရီးလမ်းဆုံး) သယ်ဆောင်သွားနိုင်သည်။ ထိုးထွက်လာသောမျဉ်းများသည်အဆုံးအထိ တွန်းပို့ကာလက်စတုံးရပ်စဲသည်။
ဆန့်ကျင်ဘက်မျဉ်းများ (opposite line)
အခုလောက်ဆို မျဉ်း —–အကွေ့ အဝိုက် အဖြောင့် အကောက် အယိုင် အနွဲ့ အဝန်းအဝှိုက် သူ့ သဏ္ဍန် သူ့ဟန်အသီးသီးရဲ့ညွှန်းဆိုဖေါ်ပြမှု အတွင်းသဘောကို အတော်အသင့် တော့လေးကျက်မိကြလောက်ပါပြီ…
ဘယ်လို မျဉ်းတစ်ကြောင်းလဲ……. ? ? ?
ကျွန်တော်ရော…………………. ? ? ?
ဘယ်လိုမျဉ်းများလဲ…………….. ? ? ?
ဘာပဲပြောပြော…ဘယ်လိုမျဉ်းပဲဖြစ်ဖြစ် ဥိးတည်ရာကတော့ဖြင့် ရှိနေခဲ့ကြပါတယ်လေ…။
2: အခြေခံပန်းချီပညာ (ဦးကျော်သူရိန်) ပန်းချီပန်းပုကျောင်း၊ရန်ကုန်
3: ပန်းချီးရေးရာနှင့်ပုံဆွဲအခြေခံများ (အောင်မြတ်ဌေး)